“ရခုိင်နဲ့ေြမွှေပွးေတွ့ရင် ရခုိင်ကုိသတ်” | ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား
at Monday, June 28, 2010 –4မှတ်ချက်ေလးေတွ
“ရခိုင်နဲ့​ေြမွှ​ေပွး​ေတွ့​ရင် ရခိုင်ကိုသတ်”ဟု​ေသာ စကား​ပံုအား​ တစ်ချို့​မှာ အမှတ်မှား​တတ်ြကသည်။ ရခိုင်နဲ့​ေြမွ​ေပွး​ေတွ့​ရင် ရခိုင်ကို သတ်ဆိုသည်မှာ ရခိုင်လူမျိုး​၊​ လူရခိုင်ကို သတ်ခိုင်း​ြခင်း​မဟုတ်ပါ၊​ ရခိုင်ငှက်​ေပျာသီး​ကိုဆိုလိုသည်။ ထိုစကား​ပံုအား​ အမှတ်မှား​ပါက အယူတစ်မျိုး​ေြပာင်း​သွား​ေစသည်။ ​ေြမွ​ေပွး​နဲ့​ ရခိုင်မှာ ရခိုင်လူမျိုး​တို့​က ဆိုး​သွမ်း​သည်ဟု အထင်ရှိသွား​နိုင်သည်။ ြမန်မာစာတို့​သည် ဖတ်​ေတာ့​အသံ ​ေရး​ေတာ့​အမှန်ဆိုသလို ရှိြကပါသည်။
“ရခိုင်နဲ့​ေြမွှ​ေပွး​ေတွ့​ရင် ရခိုင်ကိုသတ်”ဟု​ေြပာြကသည် ဆိုလိုရင်း​မှာ ​ေြမွှ​ေပွး​သည် ​ေပါက်လိုက်တာနဲ့​ တခါတည်း​ ​ေဆး​ကုသချိန်မရဘဲ ​ေသဆံုး​တတ်ပါသည်။ ထို့​ေြကာင့်​ ရခိုင်ငှက်​ေပျာသီး​ဟာ မည့်​သည်အဆိပ်ကိုမဆို အဆိပ်များ​မြပန့်​ပွား​ေအာင် ထိန်း​ထား​နိုင်တဲ့​စွမ်း​ရည် ရှိ​ေသာ​ေြကာင့်​ တကယ်လို့​များ​ ​ေြမွှ​ေပွး​အဆိပ်ကိုမိခဲ့​ေသာ် “ရခိုင်ငှက်​ေပျာသီး​မှ အ​ေစး​ ကိုထုပ်ယူ၍​ေြမ​ေပွး​ကိုက်ခဲ့​ေသာ ​ေနရာအား​ ၎င်းအ​ေစး​ြဖင့်​ လိမ်း​ကျန်ပါက​ေြမွဆိပ်အား​ ထိန်း​ထား​နိုင်စွမ်း​ရှိသည်”။
အမျိုးအစား (စကားပံု), ရ
အင္း ဟုတ္တယ္ အရင္တုန္းက အဓိပၸါယ္တစ္မ်ဳိးလို႔ထင္ခဲ့ တာ။ အခုေတာ့ ေသခ်ာရွင္းထားတာေကာင္းတယ္။
Don't slap our faces with your naked, shameless, bare-faced LIES.
Both Ayar and Zawgyi are non-standard font and do not comply to any Unicode encoding version.
if u don't explain like this the people won't understand.thanks for your explained